China TCRS Series bokushicilela isahlukanisi kwemveliso kunye Factory | IChinatown
Isetyenziswa ngokubanzi kwiifama, ematyeni okusila, kwiivenkile ezithengisa ukutya okuziinkozo nakwezinye iindawo zokulungisa ukutya okuziinkozo
Isetyenziselwa ukususa ukungcola okulula okufana nomququ, uthuli kunye nokunye, ukungcola okucolekileyo okunjengesanti, imbewu yokhula encinci, iinkozo ezincinci ezinqunqiweyo kunye nezinto ezingcolileyo ezifana nomququ, izinti, amatye, njl. Iimbonakalo:1.Thanks kwisiseko sentsimbi, akukho ukungcangcazela kunye nemithwalo enamandla xa umatshini usebenza; Ukwakhiwa kwe-2 elula kunye nesinyithi kuqinisekisa ukuthembeka; Amacandelo ama-3 avela kubakhiqizi abaphambili baseTshayina okanye iBrand International Inkqubo yokuzahlula umoya eyi-4 ayifuni ukufakelwa okongezelelekileyo kwefeni, inkanyamba kunye nokucoca umoya; 5.Lowest yeenkozo ezonakalisiweyo ezenza ukusebenza ngokugqibeleleyo kwinkqubo yokucoca imbewu; Ukucocwa ngokufanelekileyo kwengqolowa emanzi kunye neenkozo ezingcoliswe yimbewu yokhula; 7. Kulula kakhulu ukutshintsha i-angle yegubu ukusuka kwi-1о ukuya kwi-5о; I-8.Kind yobukhulu bokuvulwa kwesiseji esinqindiweyo yenza umatshini ulungele iintlobo zezinto ezisetyenzisiweyo kunye nokusetyenziswa okuhlukeneyo; Imodeli enzulu yokwahlulahlula kwimveliso efunekayo yenza ukuba ukhethe olona khetho lufanelekileyo lokucoca ukutya okuziinkozo.
Uluhlu lweParameter yobuGcisa:
Amandla e-electromotor aboniswa ngofakelo lokwahlulahlula kunye nomjikelo ovaliweyo womoya we-ASO
Amandla e-electromotor abonakalisiwe ngokufakwa kwesahluli kunye nomjikelo ovulekileyo womoya we-ASR Isaziso: Kufanele ukuba sinelungelo lokutshintsha imixholo yale khathalogu ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Zenzekelayo Dampening System